Izindaba - Mexico International Auto Parts Expo 2020
IMexico International Auto Parts Expo 2020
Igama Lombukiso: EMexico International Auto Parts Expo 2020
Isikhathi Sombukiso: Julayi 22-24, 2020
Indawo: Isikhungo Sokubonisa seCentro Banamex, eMexico City
Ukubuka konke kombukiso:
ICentral America (Mexico) International Auto parts nangemva kombukiso wokuthengisa wango-2020
I-PAACE Automechanika Mexico
Isikhathi Sombukiso: Julayi 22-24, 2020 (kanye ngonyaka)
Umhleli: Umbukiso waseFrankfurt (USA) Ltd.
Umbukiso waseFrankfurt (Mexico) Limited
Njengombukiso omkhulu futhi obaluleke kunazo zonke eMexico naseCentral America ngemuva kokuthengisa imakethe, izingxenye ezingama-20 zamazwe omhlaba ezizenzakalelayo nangemuva kombukiso wokuthengisa we-Central America (Mexico) zizobanjelwa eBanamex Exhibition Center, eMexico City kusuka ngoJulayi 22 kuya ku-24, 2020. Kunabakhangisi abangaphezu kuka-500 abavela emhlabeni wonke, okubalwa labo abavela e-Argentina, China, Germany, Turkey, United States naseTaiwan. Zingaphezu kuka-20000 izivakashi eziqeqeshiwe ezivela embonini yezimoto eza ukuzovakasha.
Ababonisi banelisekile ngemiphumela yalo mbukiso, oveza nokubaluleka kwe-Automechanika Mexico embonini. Nakulokhu futhi, umbukiso usuyipulatifomu enkulu yokuxhuma abenzi bezinqumo abakhulu emakethe yezimoto eMexico naseMelika Ephakathi.
Ngesikhathi sombukiso wezinsuku ezintathu, abenzi bezinqumo abasemqoka abavela embonini yezingxenye ezivela eMexico, eLatin America nakwamanye amazwe balapha ukuthola imikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu, izinsizakalo kanye nokubambisana embonini yangaphakathi, ukuqonda ukuqonda ukuthuthukiswa kwezimoto nokwandisa ibhizinisi labo.
I-China neMexico womabili la mazwe asathuthuka futhi angamazwe abalulekile asafufusa. Bobabili basesigabeni esibucayi sezinguquko nentuthuko. Babhekene nemisebenzi efanayo nezinselelo ezifanayo, futhi la mazwe amabili ahlinzekana ngamathuba entuthuko. NgoNovemba 13, 2014, uMongameli waseChina uXi Jinping wabamba izingxoxo nomongameli waseMexico, i-PEIA, eGreat Hall yabantu. Izinhloko zombuso zombili zibeke umhlahlandlela kanye nepulani yokuthuthukiswa kobudlelwano baseChina neMexico, futhi zithathe isinqumo sokwakha iphethini entsha yokubambisana "okukodwa okubili okuthathu" ukukhuthaza ukuthuthukiswa kweChina Mexico ubambiswano olunzulu lwamasu.
IMexico ingelinye lamazwe anenani elikhulu kakhulu lezivumelwano zokuhweba mahhala emhlabeni. Izinkampani eziseMexico zingathenga izingxenye nezinsiza emazweni amaningi, futhi zivame ukujabulela ukwelashwa ngaphandle kwentela. Amabhizinisi ajabulela ngokugcwele intela ye-NAFTA nentengo ye-quota. IMexico inake ukuthuthukiswa okuhlukahlukene kwezimboni zokukhiqiza nezinsizakalo, futhi isungule ngempumelelo ubudlelwane bezomnotho neYurophu, i-Asia neLatin America ngezivumelwano zokuhweba zamahhala nezivumelwano nezinhlangano zezomnotho.
ELatin America, iMexico isayine izivumelwano zokuhweba zamahhala (TLC) neHonduras, i-El Salvador, iGuatemala, iCosta Rica, iColombia, iBolivia, iChile, iNicaragua ne-Uruguay ngemikhiqizo nezinsizakalo zayo, futhi isayine izivumelwano zokuhambisana nezomnotho (ACE) ne I-Argentina, iBrazil, iPeru, iParaguay neCuba.
Njengoba inabantu ababalelwa ezigidini eziyi-110, iMexico iyimakethe yesibili ngobukhulu eLatin America futhi ingenye yezindawo ezinkulu kakhulu emhlabeni.
Umkhakha wezimoto umkhakha omkhulu wezokukhiqiza eMexico, ubala u-17.6% womkhakha wezokukhiqiza futhi unikela ngo-3.6% kwi-GDP yezwe.
IMexico manje ingumthengisi wesine ngobukhulu emhlabeni othumela izimoto ngemuva kweJapan, Germany neSouth Korea, ngokusho kweCosmos yaseMexico. Ngokusho komkhakha wezimoto waseMexico, ngo-2020, iMexico kulindeleke ukuthi ibe eyesibili.
Ngokwemininingwane yeMexicoan Automobile Industry Association (AMIA), imakethe yezimoto yaseMexico iqhubekile nokukhuphuka ngo-Okthoba 2014, lapho kukhula umthamo wokukhiqiza, wokuthengisa nowokuthekelisa wezimoto ezilula. Ngo-Okthoba nonyaka, ukukhishwa kwezimoto ezincane eMexico kwafinyelela ku-330164, okuwukukhuphuka kuka-15.8% esikhathini esifanayo sanyakenye; ezinyangeni eziyishumi zokuqala, inani eliqoqiwe lezwe lalingama-2726472, ukwanda ngo-8.5% unyaka nonyaka.
IMexico isibe ngumngenisi wesihlanu ngobukhulu emhlabeni wezingxenye zezimoto nezinto zokusetshenziswa, futhi imikhiqizo yayo ihlinzekelwa kakhulu izitshalo zokuhlanganisa izimoto eMexico. Imali engenayo yangonyaka odlule ifinyelele ku- $ 35 billion, ekhombisa amandla embonini yezingxenye zezimoto, ezoqhubeka nokukhulisa abahlinzeki bezwe. Ekupheleni konyaka odlule, inani lokukhiphayo kwemboni yezingxenye zokungcebeleka lidlule ngama-46%, okungukuthi, ama-US $ 75 billion. Kulinganiselwa ukuthi inani lokukhishwa kwemboni lizofinyelela ku-US $ 90 billion eminyakeni eyisithupha ezayo. Ngokusho kweziphathimandla, imikhiqizo yebanga lesi-2 neleveli 3 (imikhiqizo engadingi ukwakhiwa, njengezikulufu) inethemba elikhulu lokuthuthuka.
Kulinganiselwa ukuthi ngo-2018, ukukhiqizwa kwezimoto minyaka yonke eMexico kuzofinyelela ezimotweni eziyizigidi ezingama-3.7, cishe okuphindwe kabili umkhiqizo ngo-2009, futhi isidingo salo sezingxenye zezimoto sizokwenyuka kakhulu; ngasikhathi sinye, impilo esezingeni eliphakathi yezimoto ezifuywayo eMexico iyiminyaka eyi-14, nayo edala ukufunwa okukhulu kanye nokutshalwa kwezimali kwezinsizakalo, ukunakekelwa kanye nokufakwa kwezinye izingxenye.
Ukuthuthukiswa komkhakha wezimoto waseMexico kuzohlomulisa abakhiqizi bezingxenye zomhlaba ezizenzakalelayo. Kuze kube manje, ama-84% wabakhiqizi bezingxenye zemoto abaphezulu abayi-100 sebetshale imali futhi bakhiqiza eMexico.
1. Izingxenye nezinhlelo: izingxenye zezimoto nezakhi, i-chassis, umzimba, iyunithi yamandla ezithuthi nohlelo lwe-elekthronikhi neminye imikhiqizo ehlobene
2. Izesekeli nokuguqulwa: izesekeli zezimoto nokuhlinzekwa okuzenzakalelayo, amadivayisi akhethekile, ukuguqulwa kwezimoto, ukwakheka kokulungiswa kohlobo lwenjini, ukuthuthukiswa komklamo, ukuguqulwa kokubukeka neminye imikhiqizo ehlobene
3. Ukulungisa nokunakekela: imishini namathuluzi esiteshi sesondlo, inqubo yokulungisa umzimba nokupenda, ukuphathwa kwesiteshi sesondlo
4. It kanye nokuphathwa: uhlelo lokuphathwa kwemakethe yezimoto kanye nesoftware, imishini yokuhlola izimoto, isoftware yokuphatha umthengisi wezimoto kanye nohlelo, isoftware yomshuwalense wezimoto nohlelo neminye imikhiqizo ehlobene.
5. Igalaji likaphethiloli nokuwashwa kwezimoto: insiza yegalaji kaphethiloli kanye nemishini yokusebenza, imishini yokuwasha izimoto